Tianao ve ny loko volamena eo amin'ny MacBook? | Avy amin'ny mac aho
Tianao ve ny loko volamena eo amin'ny MacBook?
Omaly tampoka dia tonga tampoka tao amin'ny magazay an-tserasera Apple ny haingo volamena vaovao 12-inch rose MacBook. Ankoatry ny loko vaovao dia mazava fa nanao fanovana mahaliana i Apple ao anatin'ity vidin'ny milina ity ary io no manisa ireo tranga fanatsarana na fanavaozana ireo. Fa ny estetika ao amin'ny Apple dia antsipiriany tena lehibe na ho an'ny mpampiasa na ho an'ny orinasa mihitsy. ary ity dia zavatra fantatr'ireo mpampiasa ny vokatra vokariny tsara.
Amin'ity indray mitoraka ity dia manisy loko vaovao ny Mac manify sy maivana 12 ″ izay raha nilaza tamiko izy ireo taona vitsivitsy lasa izay fa hahomby tokoa amin'ny resaka smartphone sy fitaovana Apple hafa, tsy haiko raha hino izany aho. Ny zava-misy dia eo an-databatra ny loko volamena rose ary tianay hanontany anao mivantana amin'ity fanadihadiana ity: Tianao ve ny loko volamena eo amin'ny MacBook?
Vao kelikely lasa izay dia nieritreritra aho fa ny loko volamena amin'ny solosaina Apple dia zavatra tsy mety ary diso tanteraka aho. Raha ny marina ny MacBook volamena dia iray amin'ireo fahombiazana indrindra eo amin'ireo mpampiasa eo akaikin'ny girs habakabaka, ary tsy ho gaga aho raha ity loko vaovao ity dia iray amin'ireo mpivarotra tsara indrindra. Fa amin'ity tranga ity dia efa naneho hevitra aho fa na dia marina aza fa ny loko volamena rose dia tsy mahasosotra ahy mihitsy, amin'ny Mac dia hitako fa mavokely loatra. Raha ny tena izy eto no zava-dehibe dia izay lazainao ka tohizo:
Jereo ny valiny
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Tianao ve ny loko volamena eo amin'ny MacBook?
Apple Pay dia nanampy banky sy ivon-toeram-bola 50 vaovao mifanaraka amin'ny Apple Pay
Fandefasana MacBook 12-inch amin'ny faran'ny volana